🥇 ▷ Xiaomi Mi Mix 4: qeexitaanadiisa ugu weyn ayaa loo sifeeyaa oo ay ku jiraan shaashadda 2K iyo 108 MP Quad camera ✅
Xiaomi Mi Mix 4: qeexitaanadiisa ugu weyn ayaa loo sifeeyaa oo ay ku jiraan shaashadda 2K iyo 108 MP Quad camera
Xiaomi Mi Mix 3 waxaa la soo bandhigay bishii Oktoobar 2018 iyo, in kasta oo ay heshay nooc cusub oo la xiriirta isku xirka 5G dhowr bilood ka hor, waxay noqon laheyd caadi in laga fikiro in cidda guuleysata ay timid ku dhawaad ​​hal sano ka dib. Sidaa darteed, xanta waxay bilaabaan inay cod dheer ka hadlaan maxaan ku arki karnaa koorsada Xiaomi Mi Mix 4.
Runtu waxay tahay inaanan helin hadalo badan oo ah ‘Mix 4’ ilaa hada, marka laga reebo tuhun laga shakiyay bishii Maajo oo umuuqday inay aad ufiican tahay run. Bilooyinku way dhammaadeen oo hadda nin caan ah oo ku xeel dheer Blogger iyo filter ayaa wadaagaya waxa noqon kara sheegashada qaaska ah ee Xiaomi Mi Mix 4.
Waxaa naga maqnaa faahfaahinta sida shaashadda shaashadda, laakiin waxa shaandhayntu ay wadaagtay waa inay lahaan lahayd 2K qaraar, oo leh qaanso qaloocsan. Naqshadeynta Terminalka lafteeda ayaa gebi ahaanba noqon doona dhoobada
Processor-ka ma leh wax badan oo qarsoon, waxay noqon laheyd mid cusub Snapdragon 855+ laga soo bilaabo Qualcomm, oo ay weheli doonaan 12 GB oo RAM ah iyo 1 Qaaxada ee keydka UFS 3.0. Batariga ayaa lahaan lahaa 4,500 mAh awood, oo leh 45W ku dallac dhakhso leh oo leh fiilo iyo 30W markii la isticmaalayo wax-wiciyadeega wireless-ka ah, oo ay kujirto taageerada ku-dallaca ku-dallaca wireless. Saadaalin la saadaalin karo, waxaan ku rakibi lahaa MIUI 11 oo ku saleysan Android Q.
Dhanka sawirka, kama aysan gudbin faahfaahinta kamaradaha hore, halka gadaal ay ka lahaan doonaan afar muraayadood oo uu xiddiggu noqon doono 108 megapixel sensor ugu weyn Samsung, oo ay weheliso xagal ballaadhan oo 16 MP ah, dareeme kale oo 12 MP ah iyo afaraad “lebis” lens ah oo astaamo aan la garanayn ah.
Jid ahaan, waxaan lahaan lahaa isku xirnaan NFC iyo, xiisaha, soo celin lahaa qarixii, kaas oo joogay kaliya Mi Mix ugu horreeyay oo laga tirtirey mid kasta iyo moodellada soo socda.
La wadaag Xiaomi Mi Mix 4: qeexitaanadiisa ugu muhiimsan ayaa la sifeeyaa oo ay ku jiraan shaashadda 2K iyo 108 MP Quad camera